Semalt: Usatora Zvinokonzerwa neAdware kana Zvirwere Zvisina Kuwedzera
Kuisa shanduro yakanyanyisa uye kuwedzera-zvisingachenjeri kunogona kuva nengozi dzimwe nguva. Pasinei nokuti munhu akangwarira here kana kwete kana achikanda kuwedzera kune vashanduri, mumwe anofanirwa kutarisa kuti vanowana kupi kuwedzera kubva pane zvakanyatsonaka.
Oliver King, Mutengi Wekugutsikana Kwevateresi Semalt , anotaura nezvekudzivirira nzira dzekushaya malware yakaipa - barum polaris 3 reifen test.
Paiva nechinhu chimwe chinonakidza kubva pawebhu chinonzi vamwe vashandisi vepaIndaneti vanoshandisa browser extensions kuti vasarudze vamwe. Kune munhu asina kunyatsoziva kuti internet inoshanda sei, inogona kuuya sekutya kwavari. Zvisinei, kuenda kune mazuva apo zvakakosha uye zvakakosha zvinowanikwa zviri pawebhu. Makambani ane vavariro dzepfungwa dzakaguma dzichinatswa zvakanaka pamusika. Zvakatarisirwa zvakananga ndezvaizivikanwa nevazhinji vashandisi. Nenzira iyi, vanogona kukohwa zvakawanda zvekuziva panguva imwechete.
Makambani anogona kukwanisa kuwedzera mazano ekutevedza kune izvi zvakanyatsotarisa uye kutarisa zviito zvevaenzi kana kusimbisa zvipikicha zvinowanikwa pamusana pevasingazivi. Vashanduri vanovandudza zvinyorwa zvavo nguva dzose izvo zvinoita kuti zvive zvakaoma kuziva kana munhu wechitatu ane utsinye ari oga ane simba pamusoro pemamiriro acho.
Ikozvino, nyanzvi haisati dzauya nenzira yakananga yekutsanangurira pakati pezvinyorwa zvisiri pamutemo uye zvisiri pamutemo. Chikonzero chacho chiri nyore..Hapana nzira yekuudza kukanganisa kwakagadziriswa kubva kune iyo isiri iyo. Zvisinei, nekuda kweHTG, vatsvakurudzi vanoramba vachiongorora nezvekuwedzera kwekutsvaga kuti vaone kana vane mwareji kana kwete.
HTG ine rondedzero yevanhu vose vanozivikanwa neadware uye malware yakawandisa. Kuti uzive chimiro chekuwedzera, mumwe munhu anofanira kuchiisa pakurongwa. Kuti uone zvinyorwa zvanyorwa zvino, sarudza pazvigadziro uye enda kune zverimwe kuruboshwe.
Kuti uvhare mumwe, chengetedza bhokisi rekubvumira kana kuti ribvise zvachose. Kana kuwedzera kwacho kuchioneka pane yakasvibiswa, tsvaga iko kubva purogiramu. Zvimwewo, ExtShield ye Chrome inoongorora zvese zvinowanikwa zviripo uye inogadzirisa izvo zvisinganzwisisi pamutemo zvichienderana nevanotsvaga.
Nhoo ye Chrome
Icho chinhu chimwe chinoratidza zvibvumirano zvinowedzera zviripo muhurongwa. Inoramba ichicherechedza kusungirirwa kwemazuva ose emangwana uye maitiro ewebsite uye kana ikaratidza chero zviratidzo zvechinangwa chisina kunaka. Iyo nyanzvi yekudzivirira inofungawo kugadzira chimwe chinhu chinozivisa mushumiri kana kuwedzerwa kushandura umiridzi kana chero nguva inotanga kuzvibata zvisingaiti. Chimwe chinonzi Extension Defender pa Chrome Chrome chinoshandawo zvakafanana, asi nechikwereti chakakwirira pamusana pokusimudzirwa kwezvipo zvenhema muStShield.
Sakafanana nenhoo ye chrome, iyi Extension Defender inotsvaga musikana wacho achitarisa chero adware, spyware, kana malware. Nezvinyorwa zvitsva zvinowedzerwa zuva rega rega, zvinotarisa uye zvinowona kusakanganiswa kupi zvako, kunosanganisira zviri mukati nekunze kwewebsite. Iyo ine code yakasununguka inobudisa iyo inoreva kuti vanhu vose vanogona kutarisa izvo mutsara wekodhi yose unoita pawedzerwa. ExtShield haina chinhu ichi ndicho chikonzero nei vanhu vane ruvimbo rwekuwedzera muZvirevo chekuwedzera.
Rwendo rwemazuva ano rwunoita sekutanga rutsviriro rwevashandisi veIndaneti vasati vashambadziri vangaziva zvirongedzo zvenguva yemberi nechokwadi. Pamusana pebasa rakakura rakakura, vane ruzivo rwakanyanya runoita kuti zvive zvigaro zvevanokuvadza nevamwe vanhu vane chinangwa chakaipa.